सूचीसहित- ४६ दलले निर्वाचनमा भाग लिने काठमाडौंबाट, कुन जिल्लामा कति ? | Nepal Ghatana
सूचीसहित- ४६ दलले निर्वाचनमा भाग लिने काठमाडौंबाट, कुन जिल्लामा कति ?
प्रकाशित : १४ चैत्र २०७८, सोमबार २२:१५
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंबाट ४० दलले भाग दिने भएका छन् ।
देशभर ७९ वटा राजनीतिक दलहरुले आफ्नै चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारलाई उठान पाउने भएका छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० हजार ७६५ मतदान केन्द्र र ११ हजार ९६६ मतदानस्थल कायम गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रयोजनाका लागि यही चैत १५ गतेदेखि कल सेन्टर ९११०२० प्रयोगमा आउने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।